Onye na-emepụta sistemụ Jackin | Akwa mma & teknụzụ dị elu - Ever-Power
Atụmatụ sistemụ jacking a ma ọ bụ nhazi nwere ike wulite ya n'ọtụtụ ụdị site na iji bevel gearboxes, motọ, mbelata gearboxes, draịva mbanye, njikọta, plọg plummer na ngwaọrụ njikwa ngagharị.
Anọ nke nhazi usoro kachasị ukwuu ga-abụ usoro 'H', 'U', 'T' na 'I'. Rịba ama na ọtụtụ nkedo ịghasa nwere ike jikọta ya na robot ma ọ bụ na ọkụ eletrik. Nke abụọ na-enye aka ma ọ bụrụ na enweghị oghere maka ijikọ okporo ụzọ.
H-nhazi Jacking System
M-nhazi Jacking System
T-nhazi usoro Jacking
U-nhazi Jacking System
Otú usoro Jacking si arụ ọrụ
Ngwa ihe nkedo bụ ebe a na-arụ ọrụ dị iche iche na nchịkọta egwu iji nweta usoro usoro. A na-akpọkarị usoro sistemụ ịghasa "jacking system".
Ohere iji robotically jikọọ otutu ịghasa jacks ọnụ ka ha kwaga symphony bụ otu n'ime ha kasị mma uru. Atụmatụ ndị a na-ahụkarị gụnyere jacks skres, bevel gear gear, motors, Mbelata gearboxes, ụgbọala mbanye, njikọta na plọg plummer.
Usoro Jacking nwere atụmatụ izizi 2:
Ha na-ekwe ka ngagharị ahụ buru ibu buru ibu na otu moto eg dịka 4 x ME18100 ịghasa nkedo ndokwa n'ime sistemụ skru nwere ike ịmegharị ọtụtụ 400 Te (4000kN).
Nkwado ibu ọbụna karịa a dịtụ nnukwu ebe eg 20Te ibu karịa a 24m2 ebe iji anọ ịghasa jacks na 6m x 4m center spacing.
A na-ejikọ usoro sistemụ jacking n'etiti nke ọ bụla n'ime ihe sistemụ. Agbanyeghị, enwere ike ịchọta usoro jikọtara ọnụ. N'ime sistemụ ndị a, a na-emegharị jacks dị iche iche ma jikọta ya na sistemụ njikwa na ntanetị na mmechi nzaghachi. A pụkwara ịgbasawanye nke a iji hụ na ejikọtara / jikwaa sistemụ njikọrọ na-arụ ọrụ na ntanetị na-enye ohere iji usoro ụzọ ngwangwa iji nweta onyinye maka oke oke.
O kwewo Jacks Ike iji nyefee usoro sistemụ jacking n'ọtụtụ mpaghara. Typedị mmepụta ụdị ma ọ bụ na ígwè, nke obodo, ụgbọ ala, akwụkwọ ma ọ bụ ike ga-abụ ndị ọrụ mbụ nke sistemụ njiko agbanyeghị ngwa maka ama egwuregwu, nkwukọrịta na nyocha na-ejikwa sistemụ jacking nke nnukwu na obere aghụghọ.
N'agbanyeghị nke ngwa, Jacks nwere nghọta na ahụmịhe nke na-eme ka ndị na-azụ ahịa nweta ihe ngwọta sistemụ kacha mma.